कहिले बन्छ भुकम्प पीडितको घर ? – NEWS24 TV – Nepali Live – Videos & Entertainment नेपाली लाइभ
कहिले बन्छ भुकम्प पीडितको घर ? – NEWS24 TV
विनासकारी भुकम्प गएको करिव तीन बर्ष पुग्ल लाग्यो । भुकम्पबाट क्षेत्रीग्रस्त संरचना निमार्णको लागि सरकारले गठन गरेको पुननिमार्ण प्राधिकरणमा यो अवधिमा ४ पटक प्रमुख नै परिर्वतन भईसके तर भुकम्प पीडित यो चिसोमा पनि टहरामै बिताउन बाध्य बनेका छन् । मकवानपुर जिल्लामा मात्रै ८ हजार बढि भुकम्प पीडित पुननिमार्ण प्रक्रियामै समावेश हुन सकेका छैनन । लाभग्राही सुचीमा परेर घर निमार्ण सुर गरेका ३१ हजार ८ सय १७ भुकम्प पीडित प्राधिकरण प्रमुख परिवर्तनसँगै परीर्वतन हुने मापदण्डको चपेटामा परेका छन् । प्राधिकरणबाटै खटीएका प्राविधिक र ट्रकरर्मीकै रोहवरमा निमार्ण गरेका घरलाई समेत प्राविधिकले मापदण्ड विपरीत बनेको भन्दै अनुदान रोकीदिएका छन् ।